Dawarsiga: Dhaqan ama Dhib soo kordhay! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Waxaan ku billaabayaa maahmaah sanaddadan ba iga dhax guuxaysay, waa:
“Tuugsadow maxaad u talin!”. Waxaan arkyay dad ka qaylinaya magaca Soomaaliyaynta oo loo adeegsado meel kasta oo ay dunidu fowdo ka dillaacdo. Aniga taa dhibweyn iguma hayso, waayo, waxaan ba ka cabsan in aduunka noo bixiyo “Jamhuuriyadda Dawarsatada ee Federaalka”.
Waxaad shidaysaa taleefishin waxaad rabtaa inaad war aad ka daawato, waxaad 90% aad arkaysaa, yabooh, dad la horayo oo loo qaybinayo min caag saliid ah iyo juwaan bariis ah lagu sawirayo. Waa arrin iska caadi ah, kan dadka sidaa u bahdilaya iyo kan la bahdilayaba. Waanu la qabsannay hadda oo waxba nagama khaldana.
Soomaalida waxay lahaan jirtay dhaqan ku dhisan dhowsanaan, isla weyni ah inaysan qaayibin liididda, yasidda, waxayna aad isaga dul-qaadi jireen gacan-hoorsiga. Waxaa ceegaaga sooyaalka Soomaalida gaar ahaan suugaanta maahmaaho iyo sheekooyin hoga-tusaalaynaya in Soomaalida aysan qaayibi-jirin dawarsiga amaba qaraabka.
Maanta aynu joogno Soomaalidu tii hore ma aha, waa mid silloon oo sirwacan.
Dhaqanka dowladnimada oo aan meel xun ka galnay ama si xun u fahannay ayaa sabab weyn looga dhigi karaa qaayibidda gacan-hoorsiga. Kolkii hore waxay ku billaabatay in dowladaha waaweyn laga codsado taageero aqoon, qalab iyo teknooljayida oo aan heli karin, waxayna ku dhamaatay in la waydiisto kabidda miisaaniyadda dawoladda, waxaana xigay gacan-qabsiga madaxda iyo wadaaddada ay ka soo qaataan Khaliijka.
Intaa kore oo isbiirsaday ayaa dhalay shaxaadka oo loo yaqaan in maalintii loo tuugsi tago qof ka shaqeeyo xafiisyada dowladda ama hay’ad Islaamiga ah. Dalkii tuugsi isku bixin waa, oo ummad wada tuugsani isma hayn karto, mid dibadda ka soo tuugsada, mid ka dibadda ka soo tuugsada sii kuugsada iyo mid kan sii tuugsaday sii tuugsada. Maanta waa dhaqan la aqbalay oo ciwaakiisu yahay qaraabasho. Waxaa la isku haayaa oo kaliya, wa dowladda ayaa qaraabashada iska leh ama qofwalba ayaa soo qaraaban kara.
Tuugsigii halkii kuma ekaane, waxaanu ku duminay dalkii, oo watii ay isu xanaaqeen hebel oo dowlad hebel soo tuugsada iyo hebel aan waxba ku haysan dowlad hebel, sidaa darteed doonaya in asaga uu noqdo kan kaliya ee wax soo tuugsan kara. Caqligaa heerkaa ah waxa uu ku qanciyay bulshada Soomaaliyeed in si loogu sinnaado tuugsiga, la wada noqdo qaxooti, aan u qaxno halkii laga soo tuugsan jiray. Sidaa bay carro isugu dhabaqday. Waa wada tuugsigaa.
Gabagabo & Waydiimo
Soomaaliga soo kii lagu ababin jiray intii uu ka tuugsan lahaa inuu gaajo u dhinto?
Kan malyan ka haysta ee tuugsanaya maanta, maxaa loo aanayn karaa? Soo tii ay Soomaalidu dhihi jirtay “Hunguri waa wax haddii aad ku hadashana ku ceebeeyn, haddii aad la aamustana ku dila”.!. Soo innagii dhihi jirnay “Waan baahanahay bakhti looma cuno”! Maxaa la isku hayaa maalmahaan oo aan qaraabasho ka ahayn? Maxaan u la yaabnaa masaakiinta sida xirfadaysan uga tuusata suuqayada magaalooyinka Soomaalida? Horaan waan iska tuugsan jirnay, maantase waxaan bilawnay inaan ceebayno ama aflagaadayno dowladdii wax na siin waysa? Maxaan ula yaabaynaa, haddii masaakiinta ka tuugsada suuqyada Muddisho ay ku caayaan, kolkii aad gacanta u taagi wayso?
Akhristow, tani waa aragtidaydee, Maxay adiga kula tahay sababta aafada tuugsiga?